Saynisyahan 102 sano jir ah oo u dagaalamay inuu sii wato shaqadiisa - BBC Somali
Halkan ka daawo saynisyahan 102 jir ah oo dadaal adag u galay in uu sii shaqeeyo
Saynisyahan 102 sano jir ah oo u dhashay waddanka Australia ayaa ku guulaystay dagaal uu u galay in uu sii wato shaqadiisa cilmi barista oo ay isku dayday inay ka joojiso jaamacaddii uu ka shaqeynayay sababo xagga caafimaadka shaqada ku salaysan.
David Goodall ayaa maamulka Jaamacadda Edith Cowan ee galbeedka Australia waxay ku amreen in aanu imaan xarunta Jaamacadda oo uu wixii shaqo ah uu ka wato gurigiisa.
Dr Goodall oo ah saynisyahanka shaqeeya ee Australia ugu da'ada wayn, wuxuu soo saaray 100 cilmi baaris oo ku aadan culuunta biology-ga 70 sano oo uu shaqadan ku jiray, markii go'aanka uu ka soo baxay maamulka Jaamacadda wuxuu Dr Goodwall arinkaas ka qaatay in uu ka dagaalamo, isagoo ugu dambeyn ku guulaystay in hawshiisa cilmi baarista sii wato.
Lahaanshaha sawirka ABC
Image caption Dr Goodall waa saynisyahanka shaqeeya ee Australia ugu da'ada wayn,
Arinka yaabka leh waxay tahay in Dr Goodall uu doonayo in uu ku shaqeeyo si tabaruc ah oo aanu wax lacag ah qaadan, isagoo cilmi baare sharaf ahaan ah oo mushaar la'aan ah ku shaqeeya.
20 sano oo uu ka tirsanaa shaqaalaha Jaamacadda ayaa markii dambe hawlwadeenaddu waxay gaareen go'aan bishii August in ninkan joogistiisa Jaamacadda ay ka horimaanayso bad-qabka goobta shaqada, isla markaana qalabkiisa uu qaato.
Dood iyo muran ka dib waxaa la isla gartay in Dr-ku uu hawshiisa sii wato isla markaana xarun kale oo gurigiisa u dhaw laga siiyo xafiis hawshiis shaqada uu ku wato, arintaas oo uu ku guulaystay, waxaana uu sheegay inuu ku faraxsanyahay in Jaamacaddu ay siiso deegaan.
"Waxaan ku faraxsanahay inaan u helnay xal, u ogolaanaya David in uu shaqadiisa sii wato, isagoo degaya ECU" sidaas u sheegay BBC Steve Chapman oo ah kuxigeenka hormuudka Jaamacadda.
Image caption David Goodall xafiis cusub ayaa la siiyay